Mogadishu Journal » QEYBTA 10AAD 10
Rooraaye waxkasta oo uu ku yiri Fanaxley ka dhab ayay ahayd. Haba yaraatee ka mid mahay ragga u naxariista gabdhaha ama waqti isaga lumiya ka fikirka mustaqbalkooda. Waxa keliya oo uu gabdhaha uu barto oo shukaansado ugu roonaa waxa ay ahayd inuu illaa uu ka xiiso dhacayo u sameeyo waxkasta oo ay doonayaan oo aan mustaqbalku ka mid ahayn. U samaynta wax walba oo ay doonayaan gabdhuhu ayaana markii horeba keentay dalka Kenya kaddib markii uu kasoo cararay aabbihiis oo uu ganacsigiisii gabdho-la-socod kaga boodbootiyey kaddib markuu gabdhihii uu Xamar ka bartay, mid walba uga sameeyey waxyaalihii ay doonaysey. Markasta oo uu ka fikiro noloshii reerkooda sida gabdhahaasi u baabi’iyeenna, wuxuu ku fikiri jirey in aanay ahayn in dumar loo naxariisto. Inuu masuuliyad-darradiisa isagu isku eedeeyo oo qirto ma oggolayn.
Markii Fanaxley qarracanta, oo oohinta musqulaha xaggooda ula carartay, isagu wuxuu cashadiisii isaga sii watay sidii aan wax weyni meesha ka dhicin. Wuxuu islahaa markay caradu kasoo yaraato oo ay soo laabato, aad kaxaysid oo hoteelkii ku celisid, oo ma aanu doonayn inuu uga dhextago dadka meesha ka cashaynayey oo dhallinyaro Kenyan ah u badnaa. Muddo gaaban kabbacdi ayuu dhinaca musqusha ragga ka maqlay buuq dhawr nin oo uu ereyadooda ka fahmey inay qof dumar ah qaar caayayaan, qaar kalena isku deyayaan inay ka celiyaan. Wuu ku orday waayo wuu arkayey in buuqu ka baxayo dhinaca musqulaha oo Fanaxley oohinta kula carartay. Markuu goobtii yimid wuxuu fahmey in qarracankii dartiis ay xoogaa wareertay oo iska gashay musqushii ugu soo horraysey iyadoo aan fiirin inay tii dumarka tahay iyo in kale, kaddibna nin Kenyan ah oo musqusha ragga rabey inuu isticmaalaa ku xanaaqay, kuwa kalena ka celinayeen. Ninkii laga hayey ayuu isagoo aan la hadlin feer dhulka la dhigay, dabadeedna Fanaxley kasoo saaray meeshii, iyadoo weli hoos ka ooyaysa. Wuxuu keenay hoteelkeedii iyagoo aan wax hadal ahi jidka kusoo dhexmarin, dabadeedna u sheegay inuu laba casho kaddib u imaan doono.
Fanaxley aad ayay uga fikirtey sababta uu ugu soo laabanayo. dhinac ay wax u qaaddana way garan weydey. Marmar waxay niyadda ku qaboojinaysey inaan wixii makhaayadda fiidkii hore ku dhexmaray waxba ka jirin oo uu kartideeda ku jirrabayo. Marar kale waxay dib u bilaabaysey oohintii oo waxay maskaxdeeda ka qiyaasanaysey iyadoo gurigoodii Xamar kula laabatay uur aan cidda dhashay la garanayn, iyo sida taasi nolosheeda u baabbi’in doonto. Marar kalena waxay ka fikiraysey oo wax kasta kala weynaa sida ay muhiim u tahay inay ka aarsato Rooraaye oo xukuumadda Kenya ku dacweyso ayna caddayso inuu isagu ilmahan leeyahay, inuu kaga baxsadana doonayo. Waxay is fahamsiinaysey in gabdhaha hoteelka ka shaqeeya ee ay meesha isku barteeni u noqon karayaan markhaati, maadaama ay ogaayeen inuu dalxiis u waday ayna saaxiib ahaayeen.
Labadii casho kaddib ayuu siduu u sheegay u yimid, waqti galab ah Fanaxley oo fadhida kuraastii jardiinada dambe ee hoteelka taalley ee markii ugu horraysey Rooraaye ku shukaansaday. Isuma salaamin sidii diirranayd oo waayadii hore, ee qosolka iyo riyaaqu kasoo horrayn jireen. Ma fiican tahay iyo haa markii la isweydaarsadey waxyar kaddibna Rooraaye inta istaagey ayuu Fanaxley usheegay inay fiican tahay inay qolkeeda tagaan oo ku wada hadlaan. Markay Fanaxley ka yeeshay oo ay qolkii galeenna ma aanu fariisan ee inta baqshad lacagi ku jirto sariirteeda u korsaaray ayuu ku yiri “Baqshaddaas waxaa ku jira xoogaa lacag ah waayo gabar Soomaaliyeed baad tahay oo ma doonayo inaan ku arko adigoo dayacan, marka waxaan kugula talinayaa inaad dalkii aad ka timid ku laabatid. Anigu warkii aan xalay kuu sheegay waa sidiisii, marna kama noqonayo, marka haddii aadan dano kale magaalada ka lahayn, Rooraaye iska illow” Dabadeedna intayan waxba oran ayuu inta albaabkii usii riixay, irridda ka degey.
Waa Socotaa. . . .